Nnukwu ụlọ colonial + ala dị n'etiti Arona !!
HomeNnukwu lonilọ Mgbakọ + Ala Na Center nke Arona !!
MAKA :ZỌ: Nnukwu ụlọ ndị ọchịchị ga - eweghachi na etiti obodo Arona ochie, Tenerife!
Nnọọ ezigbo ọnọdụ na mpaghara dị jụụ nke obodo ahụ, ụzọ ole na ole adịghị anya maka akụrụngwa ya niile - ụlọ ahịa, ụlọ nri, ụlọ ezumezu obodo, kọleji wdg.
Mostlọ ahụ ihe ndị mbụ dị na ya na-emebi emebi, ma nwee ọnọdụ Ncheta Ọnọdụ !!
Ezigbo oru ngo maka iweghachi! Ohere inweta inweta akwụkwọ njem njem !!!
Dị kilomita 6 site n'akụkụ osimiri!
Plọ 50m si Oke Na Las Galletas, Arona!